Raw Lactoferrin (146897-68-9) Ndị na-emepụta ihe - Phcoker
Lactoferrin (LF), nke a makwaara dị ka lactotransferrin (LTF), bụ glycoprotein nke a na-anọchi anya ya n'ọtụtụ mmiri nzuzo gụnyere ……
Lactoferrin (146897-68-9) vidiyo
Lactoferrin powder Smmezi
Product Name Lactoferrin
Chemical Aha lactotransferrin (LTF) Nyocha
molekụla Fnhazi C141H224N46O29S3
molekụla Wasatọ 87 kDa
Sume H2O: 1 mg / mL
Antinye N / A
Gịnị bụ Lactoferrin?
Lactoferrin (LF), makwaara dị ka lactotransferrin (LTF), bụ glycoprotein nke a na-anọchi anya ya n'ọtụtụ mmiri nzuzo tinyere mmiri ara ehi. CRM protein a tozuru oke zuru oke dị ka ihe eji eme ya na calibrators ma ọ bụ njikwa maka ngwa nyocha LC-MS / MS gụnyere mgbakwunye allergen, ule nwa, nri ma ọ bụ ihe oriri na nri.
Agba, mmiri ara ehi mbụ amụtara mgbe amuchara nwa, nwere lactoferrin dị elu, ihe dika okpukpu asaa etu egosiri na mmiri ara ehi mepụtara. A na-ahụkarị Lactoferrin na mmiri n'ime anya, imi, akụkụ iku ume, eriri afọ, na ebe ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-eji lactoferrin dị ka ọgwụ.
A na-eji Lactoferrin mee ihe maka ịgwọ afọ na ọnya afọ, afọ ọsịsa, na ịba ọcha n'anya C. A na-ejikwa ya dị ka ọgwụ antioxidant ma chebe megide nje na nje. Ihe ndị ọzọ gụnyere ịkpalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, igbochi mbibi anụ ahụ metụtara ịka nká, ịkwalite nje bacteria na-emetụta ahụ ike, igbochi ọrịa kansa, na ịhazi usoro ahụ.
Researchersfọdụ ndị ọrụ nyocha na-atụ aro lactoferrin nwere ike rụọ ọrụ iji dozie nsogbu ahụike ụwa dịka ụkọ iron na nnukwu afọ ọsịsa.
N'ime ọrụ ugbo, a na-eji lactoferrin gbuo ụmụ nje mgbe a na-ahapụrụ anụ.
Lactoferrin bụ akụkụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma nwee ọrụ antimicrobial. Na mgbakwunye na ọrụ ndị bụ isi nke ijikọta na ibugharị iron ahụ, Lactoferrin nwekwara ọrụ na njiri nke iron antibacterial, antivirus, iguzogide nje ndị ọzọ, catalysis, igbochi kansa na ịlụ ọgụ megide ọrịa kansa, nfụkasị na mkpuchi radieshon. Peoplefọdụ ndị na-ewere ihe mgbakwunye lactoferrin iji nweta uru antioxidant na mgbochi mkpali.
Mmetụta Ọ Na-egbochi Ahụhụ
Ọ bụ ezie na emebeghị ka usoro ahụ eji eme ihe dị ugbua, lactoferrin bụ ihe ama ama nke ihe mgbochi na-emetụta mmadụ.
Lactoferrin dị n'ime mmiri ọmụmụ bụ ihe dị mkpa iji belata mbufụt nwa ebu n’afọ n’ime ụmụ nwanyị dị ime site n’ibelata ọkwa IL-6 na ibelata ọrịa na-akpata mbufụt.
O nwere ihe ogwugwu imegide ya mgbe ya na sistemuma mmadu na - emegide oria Epstein-Barr, belata mbufụt site na igbochi mmeme nke TLR2 na TLR9 na DNA virus.
Lactoferrin na-enyere aka ịkwụsị ọrụ nke nje. Ọtụtụ nje bacteria na-achọ ka ígwè rụọ ọrụ, lactoferrin nwere ike ịkwụsị nje bacteria ịbanye na iron n’ahụ mmadụ.
Na mgbakwunye na nke a, ọ nwere ike igbochi metabolism nke carbohydrate, mebie mgbidi ụlọ ha, ma ọ bụ soro ha lysozymes na mmiri ara ehi kwụsị nje.
Ọrụ Dịịrị Nkwalite Nwata / Ahụ
Infmụaka chọrọ lactoferrin ịzụlite na imeghari ka eriri afọ. Ọ bụ maka ọdịiche dị na sel sel epithelial nke obere eriri afọ, na-emetụta obere eriri afọ, ogologo, na ngosipụta enzyme.
N'ime ụmụaka nwa, lactoferrin na - eje ozi dịka onye na - achịkwa usoro ọkpụkpụ n’agba nke mmepe nke ọkpụkpụ mmadụ.
Lactoferrin na-akwalite uto anụ ahụ na uto dị iche iche n’ọbara nwa ebu n’afọ site na ime ka osteocytes na osteoblasts na-akabeghị aka.
N’ime ụmụ ebu n’afọ, Lactoferrin na-akwalite nnabata iron na mmepe nke ala ahịhịa, na-enye ohere maka ezi ahụike na uto ahụ tupu a mụọ ya.
Lactoferrin dị elu na nwa ebu n’afọ na-egbochi ibute ọrịa na mkpọpu nke membranes nwa n’afọ ka ọ na-eme ka iru ala dị mfe.
Kedu ka Lactoferrin si arụ ọrụ?
Lactoferrin na - enyere aka ịchịkwa nnabata iron n’eriri na inyefe ụmị ígwè n’ahụ.
O yikwa ka ọ na - egbochi ọrịa nje, ikekwe site na igbochi uto nke nje bacteria site na ịnapụ ha ihe ndị dị mkpa ma ọ bụ site na igbu nje site na ibibi mgbidi sel. A na-ekwupụta lactoferrin nke mmiri ara nne site n'inye aka kpuchido ụmụ na-enye nwa ara ka ọ ghara ibute ọrịa nje.
Na mgbakwunye na ọrịa nje, lactoferrin yiri ka ọ na-arụ ọrụ megide nje na-akpata ụfọdụ nje na fungi.
Lactoferrin yikwara ka ọ na - etinye aka na nhazi nke ọrụ ụmị ọkpụkpụ (myelopoiesis), ọ dịkwa ka ọ nwere ike ịkwalite usoro nchebe nke ahụ.
Lactoferrin ntụ ntụ dị mma na oke oriri. Iri lactoferrin dị elu site na mmiri ara ehi nwekwara ike ịbụ ihe nchekwa ruo otu afọ. Human lactoferrin nke emere site na osikapa esichara pụrụ iche dị mma maka ụbọchị iri na anọ. Lactoferrin nwere ike ibute afọ ọsịsa. N'ihe dị elu dị ukwuu, ọkụ anụ, enweghị agụụ, ike ọgwụgwụ, akpata oyi, na afọ ntachi akọwo.
Lactoferrin uzuzu ojiji na ngwa
INFANT MILK NA LACTOFERRIN
N'ime ụmụ amụrụ ọhụrụ dị nro, mmiri ara ara nke enwere lactoferrin (nke nwere ma ọ bụ n’enweghị ọgwụ nje) na-ebelata ohere ịrịa ọrịa septicemia na-egbu oge (nje ma ọ bụ fungal).
Nyocha miri emi banyere nsonaazụ ahụ gosiri na bovine lactoferrin belatara ọrịa kama igbochi ero ahụ ịgbasa. Nke a na-egosi na lactoferrin nwere ike igbochi ọrịa fungal ka ọ ghara ibute ọrịa nke usoro.
Bovine lactoferrin nwere ike juputa ihe mgbochi obara-obara site na ndi na-anabata ya ma meziwanye neuroprotection, neurode mmepe na ikike imu umu anumanu.
Barrington K et al, Ọnwụnwa nke Lacuna: ikpe ọnwụnwa abụọ gbara agba nke ọgbụgba na - achịkwa maka ịgbakwunye lactoferrin na nwatakịrị ahụ buru ibu, J Perinatol. 2016 Ọgọst; 36 (8): 666-9.
Lauterbach R et al., Lactoferrin - glycoprotein nke nnukwu ọgwụgwọ, Dev Period Med. 2016 Apr-Jun; 20 (2): 118-25.
Nbr1-achịkwa akpaaka nke Lactoferrin na-ebute nrụpụta osteoblastic dị iche iche. Zhang Y, Zhang ZN, Li N, Zhao LJ, Xue Y, Wu HJ, Hou JM. Ulo akwukwo Biosci. 2020 Mar
Mmetụta Dose nke Bovine Lactoferrin mgbidi na Iron Metabolism nke ụmụ ọhụrụ. Chen K, Zhang G, Chen H, Cao Y, Dong X, Li H, Liu C. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2020
Lactoferrin: Onye egwu di egwu na Neonatal Host Defense. Telang S et al. Ndị na-edozi ahụ. (2018)
Ọrụ nke Lactoferrin na Neonates na ụmụ ọhụrụ: Mmelite. Manzoni P et al. Am J Perinatol. (2018)
Enteral lactoferrin supplementation maka igbochi sepsis na encrotizing enterocolitis na ụmụ aka tupu oge eruo. Pammi M et al. Ebe nchekwa data Cochrane Syst Rev. (2017)
Gịnị bụ Mmeju Lactoferrin na-erite uru Maka ndị okenye na ụmụ ọhụrụ?